शुष्माको भाइले नवराजलाई गम्भीर आरो’प लगाएपछि नवराजका भाइले पनि दिए कडा जवाफ(भिडियोसहित)
May 30, 2020 2663
गत शनिवार देखि रुकुम जाजरकोट घटना निकै चर्चीत भएको छ । शनिवार प्रेमीका लित भन्दै रुकुम गएका जाजरकोटका नवराज विक स्थानियको आ’क्रमणमा परि निध’न भयो । उनको श:व भेरी नदिमा फेला परेको थियो ।
उनीसंगै गएका साथी मध्य ४ जनाको श’व फेला परेको छ भने अझै एक जना हराइरहेका छन् । नवराजको प्रेमीका भनिएकी युवतीको गाउँमा गएका उनीहरुलाई स्थानियले ल’खेट्ने क्रममा उनीहरु भागेको बताइएको छ । पोष्ट’मार्टम रिपोर्टमा कु’टपि’ट गरेको देखिएको भनिएको छ ।
घटनाको अनुसन्धान जारी छ । यसै अवस्थामा नवराजको प्रेमिका भनिएकी युवतीका भाईले आफ्नो दिदी र नवराजको प्रेम सम्बन्धका बारेमा केही कुरा खुलाएका थिए । उनले नवराज ला’गु औ’ष’ध ‘दु’ब्र्य’सनी भएको र आफुलाई पनि खान प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताएका थिए । नवराजको सोही वानीका कारण आफ्नो दिदीसंग उनको प्रेम सम्बन्ध छुटेको उनका भाईले बताएका छन् ।
युवतीको भाईको यस्तो कुरा वाहिरिए पछि नवराजसंग लामो समय संगत गरेका विशाल विकले पनि केही कुरा खुलाएका छन् । उनले आफुलाई नवराजको दाई भन्दै परिचय जनाए’का छन् । विशाल नवराजका साथी र छिमेकी पनि बताएका छन् । नवराज गाउँको स्थानिय खेलाडी पनि भएको बताएका छन् । उनले नवराज ला’गू औ’षध’ प्रयोगकर्ता नभएको बताएका छन् ।
उनले नवराजलाई लगाएको त्यो आरोप सरा’सर झुट भएको बताएका छन् । उनले एक महिना अघि पनि युवतीको भाई आएर नवराजको घरमा बसेको पनि बताएका छन् । विशा’लले नवराज र ति युवतीको प्रेमका बारेमा आफु पनि जानकार भएको बताएका छन् ।
नवराजको घरमा आएर बसेको आफुले पनि देखे’को पनि बताएका छन् । आफुसंग पनि युवतीको फेसवुकमा कुराकानी भएको र तिमी नवराजको प्रेमिका हो ? भनेर प्रश्न गर्दा हो म नवराज’को प्रेमीका हो भनेर भनेको बताएका छन् ।
उनले नवराजले फेसवुकमै ति युवतीलाई श्रीमती (बुडी) भनेर सम्बोधन गरेको बताएका छन् । नवराज प्रहरी सेवा’मा जाने तयारीमा रहेको पनि उनले बताए । विशाल आफु पनि नवराजसंगै प्रहरी सेवामा काम गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
तीन स्थानमा ल’गाएको फर्म मा नाम निस्किएको र अन्तरवार्ता मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् । पाँच महिना अघि नेपालगन्जमा प्रहरी सेवाका लागि दिएको निवेदनमा पास भएको र अन्तरवा’र्ताको काम बाँकी रहेको बताएका छन् ।
उनले नवराज र शुष्माको सम्बन्ध’मा पछिल्लो समय भने चिसोपन आएको आफुले थाहा’ पाएको बताए । पछिल्लो पटक एक महिना अघि नवराज युवतीको घरमा जाँदा खटपट भएको आफुले थाहा पाएको बताए । उनीहरुबीचमा ख’टपट भएको थाहा पाए’को तर त्यसको कारण के हो मलाई थाहा छैन ।
ति साथीले केटीको मोवाइल पनि नवराजसंगै भएको नयाँ कुरा उनले खुलाए’का छन् । नवराजको शव फेला पर्दा युव’तीको मोवाइल पनि उनकै झोलामा फेला परेको उनले बताए’का छन् । त्यो मोवाइल अहिले प्रहरीसंग भएको बताए । भि’डियो हेर्नुहोस…
Prevनवराजका बुबा पनि आए मिडियामा, खुलाए यस्ता नयाँ तथ्य, हेर्नुहोस् (भिडियोसहित)
Nextआज एकैदिन १८९ जनामा कोरोना भेटियो, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्
राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा पुरुष खेलाडी खेले`को भन्दै लिंग जाँचको माग !